कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधारः इशारा गर्छन्, बोल्न खोज्छन् « मेचीखबर
कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधारः इशारा गर्छन्, बोल्न खोज्छन्
२४ असार २०७३, शुक्रबार ०६:४५
झापा । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजेपछि उनलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास प्रणाली (भेन्टिलेटर)बाट हटाइएको छ । फोक्सोको निमोनियाका कारण अचेत भएका उनको ओम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उपचारमा संलग्न डा. लवनरसिंह जोशीले कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधार देखिँदै जानु एक प्रकारको चमत्कार भएको बताए । ‘डाक्टरसा’बको ज्यान बचाउन सकिन्छ भन्ने आशा निकै कम थियो,’ बिहीबार साँझ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले भने, ‘अचेत भए पनि हामीले प्रयास छाडेनौँ । उहाँ रिकभर हुनुभयो । यो एक प्रकारको चमत्कारजस्तै हो ।’
स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि डा. शशांक कोइरालाले बोल्न थालेको उनका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले बताए । ‘उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको छ । भेन्टिलेटर हटाएर आइसियूमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘इशारा गरेर मान्छे चिन्ने र बोल्न खोज्नुभएको छ । मुखमा माक्स लगाएकाले बोल्न नमिल्ने मात्रै हो । तर, चिनेका मान्छेलाई देख्दा इशाराले कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ ।’ बिहीबार बिहानबाट कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको तिवारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।